Iintyatyambo ziiThe Chainsmokers - Izinto Zobugcisa
Isihloko somculo asiveli kumagama, kodwa endaweni yoko sibhekisa kwimvumi yeendwendwe, umculi weengoma wasePhiladelphia uRozes. Ifumanisa abaTshinxi betyhila icala labo elibuthathaka njengoko uRozes ecula ngendlela uthando lwakhe ngobuhle bakhe obukhetheke ngayo kangangokuba angaziva bunzulu emathanjeni akhe.
Umntu ongatshatanga waba yi-Chainsmokers yesibini ye-Hot 100 hit emva kwe '#Selfie' eyaphumelela i # 16 incopho ngo-Epreli 2014.
U-Andrew Taggart kunye no-Alex Pall we The Chainsmokers babhale kwaye bavelisa ingoma yonke malunga neeyure ezisibhozo. 'Kupholile ukuba ezinye zeengoma zikule ngoma ngokukhawuleza kangakanani - ziyinyani isitayile sabatshayi, utshilo u-Taggart Ibhilibhodi kwiphephancwadi. 'Sifunde yonke into ngaphandle kweYouTube, ke sihlala sisenza into ebesicinga ukuba izwakala ilungile, kwaye kubonakala ngathi senza konke okulungileyo ukwenza uhlobo lwethu lwesandi.'
Ebuzwa ngu Ibhilibhodi ukuba le ngoma ibizwa ngegama lakhe, uRozes uphendule wathi: 'Khange sigqibe ngegama xa sibhala ingoma. Ukuba kwathiwa igama emva kwengoma, bekuya kuba, 'Yithi awusoze undiyeke ndihambe.' Kodwa Abatshintshi babesandula ukukhupha ingoma ebizwa ngokuba 'Makuhambe,' ke ayisiyonto esinokuyenza. Xa bandithumelela i-imeyile umxube wokugqibela, bawubiza ngokuba yi 'Roses.' Yabambeka- kukho i-emoji elungileyo, kwaye ligama lam. '
URozes ucula apha malunga nokuchitha 'ubusuku ngefilimu endala.' Ucacisile: 'Umfo endithandana naye ngoku kwaye ngubani le ngoma imalunga naye, ungumntu othanda imovie. Kwaye bendisazi ukuba lowo iya kuba ngumhla wakhe ofanelekileyo, ukuphola nokubukela imovie yakudala. Ke yile nto ithi qatha engqondweni yam xa ndiyibhala. '
eyona nto intle malunga nobusuku nje kukuba asilwi
yintoni ingoma emhlophe emhlophe malunga
maria kufuneka umbone
Ingoma ymca ingantoni
sithandwa endibathandayo sihlangene apha namhlanje ukuzobhiyozela le nto kuthiwa bubomi